ဇင်ဝိုင်းကြောင့် ဖျော်ဖြေရေး အနှောက်ယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မီမီဝင်းဖေ - Cele GabarCele Gabar
၂၀၁၈ ခုနှစ်အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲကြီးကတော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ဂယက်အရိုက်ဆုံး ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ အကယ်ဒမီဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေ ကိုလည်း ပရိသတ်တွေက မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ အထိ ဂယက်တွေ ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ မကြာခင်မှာပဲ အကယ်ဒမီအတွက် အကဲဖြတ်ပေးကြတဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့တွေ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့သလို မတရားဘူးလို့ ပရိသတ်တွေ စီက ဝေဖန်သံတွေလည်း ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အနုပညာရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာကို အကယ်ဒမီ ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ဝေဖန်ထောက်ပြခံခဲ့ရတဲ့အထိ ဒီနှစ်အကယ်ဒမီ ပေးပွဲဟာ ပွဲဆူခဲ့တာပါ ။
လတ်တလောမှာတော့ the 5ive concert liveမှာ တေးသံရှင် မီမီဝင်းဖေက ပန်းချစ်သူသီချင်း ဆိုနေစဉ် နောက်ခံ LED screenမှာ ဒဏ္ဍာရီရုပ်ရှင်ကားထဲက ဇင်ဝိုင်းပုံကြီးပေါ်လာတော့ . ပရိသတ်အရမ်းကြိုက်ခဲ့ပြီး ဦး ဇင်ဝိုင်းကိုယ်တိုင် အကယ်ဒမီတစ်ပေးခံခဲ့ရတဲ့ ကားဖြစ်နေပေမယ့် ပိတ်ပေးပါဆိုပြီး အောက်ကပရိသတ်တွေက ဝိုင်းအော်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ် ။ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်ကအသက်ပါ ၊ ခုလိုချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကပါ ဒီလိုဆန့်ကျင်နေကြတဲ့အတွက် ရလဒ် ကတော့ ကောင်းစရာမမြင်ပါဘူး ပရိသတ်ကြီးရေ ..။
Source : Kyawhtet Thu
ဇငျဝိုငျးကွောငျ့ ဖြျောဖွရေေး အနှောကျယှကျဖွဈခဲ့ရတဲ့ မီမီဝငျးဖေ
၂၀၁၈ ခုနှဈအကယျဒမီထူးခြှနျဆုပေးပှဲကွီးကတော့ ပရိသတျတှကွေားမှာ ဂယကျအရိုကျဆုံး ပှဲတဈပှဲဖွဈခဲ့ပါတယျ ။ အကယျဒမီဘုတျအဖှဲ့ဝငျတှေ ကိုလညျး ပရိသတျတှကေ မကမြေနပျ ဖွဈခဲ့ကွတဲ့ အထိ ဂယကျတှေ ရိုကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ မကွာခငျမှာပဲ အကယျဒမီအတှကျ အကဲဖွတျပေးကွတဲ့ ဘုတျအဖှဲ့တှေ လာဘျပေးလာဘျယူ ရှိတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှထှေကျပျေါလာခဲ့သလို မတရားဘူးလို့ ပရိသတျတှေ စီက ဝဖေနျသံတှလေညျး ထှကျရှိခဲ့ပါတယျ ။ အနုပညာရှငျ အသိုငျးအဝိုငျးထဲမှာကို အကယျဒမီ ဘုတျအဖှဲ့ရဲ့ အားနညျးခကျြတှကေို ဝဖေနျထောကျပွခံခဲ့ရတဲ့အထိ ဒီနှဈအကယျဒမီ ပေးပှဲဟာ ပှဲဆူခဲ့တာပါ ။
လတျတလောမှာတော့ the 5ive concert liveမှာ တေးသံရှငျ မီမီဝငျးဖကေ ပနျးခဈြသူသီခငျြး ဆိုနစေဉျ နောကျခံ LED screenမှာ ဒဏ်ဍာရီရုပျရှငျကားထဲက ဇငျဝိုငျးပုံကွီးပျေါလာတော့ . ပရိသတျအရမျးကွိုကျခဲ့ပွီး ဦး ဇငျဝိုငျးကိုယျတိုငျ အကယျဒမီတဈပေးခံခဲ့ရတဲ့ ကားဖွဈနပေမေယျ့ ပိတျပေးပါဆိုပွီး အောကျကပရိသတျတှကေ ဝိုငျးအျောခဲ့ကွတယျလို့သိရပါတယျ ။ အနုပညာရှငျတဈယောကျအနနေဲ့ ပရိသတျကအသကျပါ ၊ ခုလိုခဈြခငျအားပေးတဲ့ ပရိသတျတှေ ကပါ ဒီလိုဆနျ့ကငျြနကွေတဲ့အတှကျ ရလဒျ ကတော့ ကောငျးစရာမမွငျပါဘူး ပရိသတျကွီးရေ ..။
Previous Previous post: သမီးလေးရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုမျှဝေလိုက်တဲ့အေသင်
Next Next post: ရှုတင်မှာ ပျော်ရွှင်စွာ သီချင်းတွေ သီဆိုခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ
ကိုယ်ချစ်ကိုမရှာဘဲ သူချစ်ကိုရှာခဲ့လို့ သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးလေး တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာဆိုတဲ့ ဆုပန်ထွာ
Published: January 28, 20193:19 pm
Published: January 3, 201911:07 am
၀ါကျွတ်ကာလနှောင်းပိုင်းမှာ စွံသွားတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်သူထူးစံ
Published: December 8, 201810:28 am
စင်ဂယ်မားသားတစ်ယောက်ရဲ့ရဲဝံ့မှုတွေကိုဖော်ကျူးထားတဲ့ အေသင်ချိုဆွေရဲ့ သီချင်း MTV
Published: January 1, 20191:38 pm
လွင်မိုးကတောင် ချီးကျူးစကားဆိုလိုက်တဲ့ နေတိုးရဲ့ ကာရိုက်တာ
Published: March 11, 20193:28 pm